“ သင်ကိုအနုပညာရှင်တစ်ယောက်က လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ရင် သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ”
ကျွှန်မ အိမ်မက်တည်းက မင်းသားလေးပါ...... သူအရင်က မင်းသားလုပ်ရင်ကောင်းမလားမေးတော့ ကျွှန်မ သူ့ကို ဘာမှ မဖြေခဲ့ပေမယ့် သူမင်းသားလုပ်မှာ သိပ်ကြောက်ခဲ့သူပါ... သူမင်းသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်... သူဟာ လူတွေအားလုံးရဲ့ အချစ်တော်မင်းသားမဖြစ်စေချင်ဘူး...
Post By : အိမ်မက်မင်းသားလေးရဲ့ ..ဆု
innnn...................... bel lo pyaw ya ma lae pop naw sar tel pop naw latt kyi nae pop naw lone wa ko nyin phyit lite hmar pop
Post By : nothing8000
မိုးစက်မှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။သူကသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် အနုပညာသမားပါ။မိုးစက်ကသူ.ကိုသရုပ်ဆောင်ဖြစ်စေချင်တာပါ။မိုးစက်ကစာရေးဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လေ။သူကအခုတော့မီးရောင်အောက်ကဇာတ် မင်းသားပါ။မိုးစက်ရဲ.စိတ်ကူးတွေကိုအမြဲစိတ်ကူးယဉ်နေမိပါတယ်။
Post By : မိုးစက်ပွင့်ဝေ
ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်။ လက်ခံတာ လက်မခံတာ ကသူ.ပေါ်မှာမူတည်နေတယ် ချစ်စရာလေးကိုလူတိုင်းတော့ချစ်ကြတာပဲ ဒါပေမဲ့........
Post By : လိပ်ပြာလေး
Post By : သမီးချော
Post By : အကြင်နာ
Post By : thwe
သရုပ်ဆောင် ဆိုတော့ နည်းနည်းစဉ်းစားရမယ်နော်။ သူတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ ရှင် ဟုတ်ဘူးလား? အင်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Actor ဆို ပိုကောင်းတာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား?
Post By : devil
ကို့ ချစ်သူကနာမည်ကြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် သူကကို့ အတွက်တော့ အရာရာပြည့် စုံနေတဲ့ဘ၀တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆိုတာသိနေတဲ့အတွက်လာပြောတဲ့သူကိုsorryပါလို့ 
ိုနေတိုးဆိုရင်တော့လက်ခံချင်တယ် ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့ခံစားရတယ် နေတိုးကားတွေပဲကြည့်တယ် သူစကားပြောတဲ့အခန်းတွေကရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတယ်သူ့အကြည့်တွေကိုလည်းအလိုလိုနေရင်းရင်ခုန်လာတယ် ကြာရင်ရူးတော့မယ်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ကူညီပါနော် ပြေတီဦးကိုအရမ်းချစ်တယ်လို့ပြောပေးကြပါ ပြေတီဦး ရဲ့..phone နံပါတ်သို့မဟုတ်..Email..လိပ်စာတခုခုရရာလိုချင်ပါတယ်ကွယ်...please help me. thank you.
Post By : kyipharusa@gmail.com
အောင်ရဲလင်း ဆိုရင်တော့စဉ်းစားမယ်လေ။My favourite actorမို့လို့
phyu phyu kyaw thein so yin very very very very very very GOOD
Post By : phosan
i ma sorry. lo pyaw lite mar pot.i mar chitthu shi nay p lay. thu ka lwe p bal thu co mha ma chit ng woo.sate lal ma win sar woo
Post By : zun tha zin
if, he was harry potter, i will accept him. i think that this dream is true. MY LOVINGLY , HARRY POTTER
Post By : WAI PHOO KHAING
ကိုယ့်မှာလဲချစ်သူမရှိဘူးပေါ့နော်....မင်းသားတစ်ယောက်ယောက်ကသာလာပြောရင် တော့နော်...တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံမှာပါရှင်...တကယ်ချစ်တဲ့သူကိုသာ လက်ထပ်ချင်ပါတယ်ရှင်.....
Post By : ချစ်မမ
sin sar: lite oo mal
Post By : zin latt
ချစ်သူတစ်ယောက်အပေါ်သစ္စာရှိတဲ့ယျောက်ျားအတွက် ဘယ်လိုလူမျိုးကပဲ ဘယ်လောက်များတဲ့ငွေကြေးတွေနဲကိုယ့်ဘ၀ကို ၀ယ်ယူပါစေ လက်ခံမိမှာမဟုတ်ဘူ အဲ့ဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ပဲ......................။
Post By : မျက်ချယ်
လုံးဝဘဲ ကိုကလွဲပြီးအားလုံးကို sorry
SAI SAI so yin lat khan mae.ta char thu so NO pae.
Post By : Insect
I want to be an Empress.I don`t want to beaQueen.
ငါကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမယုံလို့ဘယ်သူပ`ဲဖြစ်ဖြစ် sorry ပဲ
Post By : နံနက်ခင်း
မဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာ အိမ်မက်ကတော့လူတိုင်းမှာရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကအပြင်မှာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားတက်ဖို့လိုတယ်လေ
Post By : ရွှန်းလက်
အာ ကောင်းတာပေါ့ သူ့ကို သီချင်းဆိုပြီးစားခိုင်းမှာပေါ့ အိမ်မှာ ဇိမ်နဲ့နေမယ်။ နောက်ပြီး အနုပညာရှင်ဆိုတော့ အပေါင်းအသင်းလည်း များမယ် ဒါဆို ရင် ပျော်စရာ ကြီး။ အကောင်းဘက်ကနေမြင်ကြစမ်းပါဗျာ တစ်ချို့တွေရေးထားတာများေ--ာက်ကြီးေ--ာက်ကျယ် လူ ကို လူအချင်း လူလိုမြင်တာကောင်းပါတယ် ဘဝက တိုတိုလေးနေရမှာ။
တကယ်ရောဖြစ်နိုင်လို့လား ဖြစ်နိုင်ရင်တောင် မြင့်မြတ် ဆိုရင်တော့ လက်ခံမယ် တခြားသူဆိုရင်တော့ စဉ်းစားမယ်
Post By : J & J
ထွန်းထွန်း ရဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ဦးပါ သူ့ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မင်းသားတစ်ယောက်လိုဘဲ ချစ်တာပါ ချစ်သူတစ်ယောက်လို မချစ်တဲ့အတွက် လက်ခံမိမှာမဟုတ်ပါဘူး သူတကယ်လက်ထက်ခွင့်တောင်းခဲ့ရင်တော့ အရမ်းပျော်ရွှင်မိမှာပါ။လက်မခံပါဘူး ဖြစ်နိုင်ရင် သူရဲ့ email account ကိုသိချင်ပါတယ်။ဒါကျွန်မရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပါ
Post By : ထွန်းထွန်း ချစ်သူ
Post By : ၀ိုင်
အနုပညာကိုတော့အားပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် sorry par
Post By : mone
သဉ္ဖာဝင့်ကျော်သာဆိုရင်တော့ နှစ်ခါပြန်တောင် ဟန်းနီးမွန်ထွက်ပစ်လိုက်မယ်။
Post By : ကိုဗနာင်
ိလူတစ်ယောက်ရဲ့ ရန်ခုန်သံကိုသိရင်ပြောပြပါလား။ အိမ်မက်ဆိုတာဘာလဲ။
Post By : Black Lady
ပြေတီဦးကသာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင်f m i city တ၀န်းလုံးကိုအကုန်အကျခံပြီးတော့တာဝန်ယူကျွေးမွေးလိုမယ်
ပွင့်ဆိုရင်မဆိုးဘူး ဖက်အိပ်လို့ရတယ် ဟီးဟီး
Post By : kyaw.pool.it
jouk jack so yin talt ma soe bu.
ကိုရဲတိုက် က လက်ထပ် ခွင့်တောင်းလာရင် အရမ်းပျော်မှာ
Post By :ိဘယ်သူလဲ
နိုး............ကိုယ့် ချစ် သူ က လွဲလို့ 
may that khine ko dot kyate tar ......u mal lay .....ok pop...:P
i dare not to believe ( actors&actress ) .....................but i love my poet.
Post By : h
inn dar so sin sar pay mae lae
Post By : lwann
Post By : မေလမင်းအိမ်
ဗေလုဝရေ လာပါတော့ ဒီကစောင့်နေတာနော်
Post By : ကိကိ
ကိုကိုကလွဲပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို မျက်စောင်းတောင်မထိုးပါဘူး အားတော့နာပါတယ်
Post By : ပိစိ
နင်တို့ တွေငါ့ကိုတော့မယူကြပါနဲ့ နော်။ ငါကVIP ဆော်တွေကိုပဲကြိုက်တာဟ။ ငါ့ကိုတွေ့ ချင်ရင် SZ ကိုအရင်ရှင်းလိုက်။ ဗိုလ်တစ်ထောင်ကိုတော့လိုက်မလာနဲ့ ။ငါနင် တို့ ကိုကြောက်တယ်။ ငါကအမှန်လေးတွေကိုပဲကြိုက်တာလေ။
Post By : Jouk Jack
လုံးဝ နိုး ပဲ..
i love only zune zune. zune is my life . so, other cannot.
Post By : myozun321@
Post By : မြတ်နိူး
i like sai sai,htun htun,nae toe.another sorry.
Post By : may thwe
D.Yan ko myin taw myin phu tha lo lo khan sar ya tal.Bae thu nae tuu mhan lae ma thi bu,sin sar loh lae ma ya bu.Thu ko lae ta khar ma ma myin phu bu.But he is my favourite singer.D.Yan ko taw ko yae favourite singer ta youkanay nae chit par tal........
ကျွန်မက ကိုနေတိုးရဲ့ပရိတ်သတ်လေ။ ကိုနေတိုးအစစ်ကိုတော့ လက်မထပ်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုနေတိုးနဲ့တူတဲ့ (တောင်ပေါ်သားသူငယ်ချင်းလေး)ဆိုရင်တော့ ဟဲဟဲ
Post By : noenoe1983
အနုပညာရှင်ကို အနုပညာသဘောနဲ့ဘဲ ချစ်ပါတယ် ချစ်သူတစ်ယောက်အဖြစ်တော့ မချစ်နိုင်ပါဘူး ထွန်းထွန်း ကိုလဲ အဲဒီလိုဘဲ ချစ်ပါတယ် ထွန်းထွန်းရဲ့ ပရိတ်သတ်
Post By : ချယ်ရီ
him.......... i refuse that, when he lie his feeling, what can i do?
Post By : pucute
ခက်တော့ခက်နေပြီဗျာ့..ကျွန်တော်ချစ်သူကလွဲလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ဘူးဗျာ့.. ကျွန်တော်တို့ကသူငယ်ချင်းချစ်သူတွေလေ..သူ့တစ်ယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်တာ.. ဒါပေမယ့် သူ့ကို Lဆိုင်းဇီနဲ့ တင်စားထားတယ်..Lဆိုင်းဇီ ဆိုရင်တော့..
Post By : ဝေလင်း(UCSM)
Post By : saung hnin phyu
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် မချစ်ရင်တော့ sorry ပါ......
Post By :ူlaminlay
ဘယ်သူလဲဆိုတာအရင်ပြော........သေချာရင် .......... ဝေဖာကျွေးပြီးဧည့်ခံမယ်...................
Post By : သော်တာလမင်းလေး
Post By : karataman99@gmail.com
....thar thar kyie kyie pop..['khin phone' so yi po kaung tal]
Post By : echo
kya ma mar chit thu shi tal shine nya yal kyi late mal
ယူတော့ယူမယ်ဒါပေမယ့် မယုံရဲဘူး ငါကရုပ်ရှင်မင်းသားလေ
Post By : lampard
သူ့တို့ကိုမယုံရဲပါဘူး၊ သူတို့ကသရုပ်ဆောင်တွေမဟုတ်လား ၊ ကိုယ့်ကိုလဲသရုပ်ဆောင်ပြနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.........
အရင်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ကြည့်ပေးပါလား :P (လက်တွေ့မှသိမှာလေနော်) တကယ်မဟုတ်တာတောင် စဉ်းစားရခက်လိုက်တာနော်!!!
ကိုကြီး ဟက်ကက် ဆိုရင်တော့ လက်ခံမယ်
Post By : အချစ်
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့သူဆို အမြဲ welcome !
နှလုံးသားမပါဘဲနဲ့...ဘယ်လောက်နာမည်းကြီးဖြစ်နေပါစေ....sorry လို့ပြောမှာပဲ ဒို့ကတော့..သူနဲ့သာဆိုရင်......
Post By : pine2
Post By : comet
Korea actor so yin accept mal. If he is Myanmar actor,he must handsome.So I will accept him.
Post By : thonelay
i love muint myat
Post By : kyawtzarchilwin
myint myat so yin welcome par.I LOYE MYINT MYAT.
Eidra Kyaw Zinဆိုရင် အရမ်းကောင်းမှာနော်သူမလိပ်းစသိရင်ပြောကြားပါနော့ု့ Thank you konaingoo08@gmail
Post By : Ko Naing
အင်း စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားမယ်လေ အဟီ သူက လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပင်မယ့် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မှလား ဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် ယုံဘူး ယုံဘူး အဟီ .... စိတ်ကူးနော် .... တကယ်ဟုတ်ဘူး
ရင်ခုန်သံ FM က ကိုဇေယျာလင်းရောပါလား? သိပါရစေ.......သူ့ဆိုရင်တော့ မငြင်းဘူးလို့.........ပြောပေးဦးနော်
ကိုရီးယားမင်းသားတွေနဲ့ City Fm ရဲ့ World of song program က ကိုကောင်းမြတ်စိုး ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားပေးမယ်လို့........ဟား ...... ဟား .......... ဟား.........အလကား တကယ်ပြောတာ
Post By : City Fm ရဲ့ World of song program မှကိုကောင်းမြတ်၏ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်
......မယ်လိုဒီ ဆိုရင်တော့...အားနာနာနဲ့လက်ခံရမှာပေါ့.......... ကျန်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ......့နိုး..............ပဲ ညှင်း..... ညှင်း
Post By : ta chain ga MA
ဒါပေမယ့် ...ချစ်တာရင်ဘတ်ထဲကအနုပညာ အပေါ်ရံ လွှာရှု ချင်စရာအရေပြားမှမဟုတ်တာကွာ...........
Post By :်ူflowerstar
ko ma chit yin nyin ya mhar bal.
Post By : sai thet
If I love to him I say YES. But i Do not love him I say NO.
i koayann chit tat lover ko pal lat htat mhar par...... love so tar phan tee loz ma ya phyat see loz ma ya tatayar moz loz i`s lover ko pal lat htat mal.........taung pan par tal loz pyaw mhar pop.....
ကျွန်တော့ကိုသာလာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့......အားနာစွာနဲပဲ ငြင်းပါယ်ရမှာပေါ့...အဲဒါမှမရရင်တော့အနစ်နာခံပြီး....လက်ထပ်ရပေမပေါ့ ဗျာ.............
Post By : မြင့်မိုးမောင်
i do not love actores
Post By : honey
no par...sorry par...sai sai so yin tot ta myo pop...ha ha
Post By : yamin
chit thue way soayhayyaya
Post By : junejune
lotion လူးပြတဲ့ အနုပညာရှင်မျိုးဆိုရင်တော့ ကြောက်တယ်..
Post By : နတ်စိုး
အရင်ဆုံး လူချင်းတွေ့ကြည့်မယ် စကားပြောကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်မယ်
Post By : အလွမ်းဝေ
LU KYAW SO TAL LU SO YIN TOP SORRY PAL
Post By : CHAT TATE MA
If iI get Myint Myat,I am very happy
Post By : Ingyinkhine
ကျွန်တော်ကတော့ ချစ်သူကလွဲလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှရင်မခုန်ပါဘူး ........ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်သူ့ကိုအရမ်းချစ်လို့ပါ...... သူကသိပ်မချောပေမယ့် ကျွန်တော့်အပေါ်ကိုနားလည်ပေးလို့ပါ......... ဘယ်အနုပညာရှင်မှ အဲလိုနားလည်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး
Post By : ဘ၀မင်းသား
သြော်.. မင်းသားကိုကြည်ဖြူဖို့ Jinx က သ၀န်တိုတတ်တယ်ရှင့်
Post By : Jinx&Jonah
Post By : အလွမ်းမိုးစက်
အင်းအနုပညာရှင်နေနေ ဘာနေနေကိုယ့်ကိုယ်တကယ်ချစ်ရင်ကိုယ်ကလည်းချစ်နေရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့
Post By : အဖြူရောင်
Post By : ၀င့်ဝင့်
fool nay lo pyaw tar pa` phit hmar par
Post By : jame bon 007
စိတ်ကူးရင်အိပ်မက်ဆိုတာ အရမ်းရူးရာကျလွန်းတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမယဉ်ဘူး ဘယ်သူနဲ့ဘဲ လက်ထပ်လက်ထပ် အတူတူနေရင်အစဉ်ပြေဖို့လိုတယ်လေ ချစ်တာကလည်းခဏပါဘဲ တစ်ခုခု ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင် ချစ်တာလဲမကယ်နိုင်ဘူးနော်............
Post By : ကောင်လေး
Post By : ယုယ
ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးမရင်တတ်ပါဘူးဗျာ... "စိတ်ကူးရင်အိပ်မက်ကလက်တွေ့နဲ့တခြားစီ"ဆိုတာကြားဘူးတယ်ဗျ... ကျွန်တော်ကတော့"မ"တယောက်ကိုပဲ ချစ်တာပါ....
Post By : jerry
Post By : ဝေယံ
Post By : poemofmiss
Post By : ပန်းပန်း
အင်း.............. ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ သူဆိုရင်တော့ လက်ခံမယ်။ မကြိုက်တဲ့သူကြီးဆိုရင် ငြင်းရမှာဘဲ............. ခတ် တင်းတင်း ပဲ ..ဟဲ..ဟဲ
Post By : အိုဝင်
actor ta yought ka married kwin taung yinayan happy pop. dar pay mae phit khin tar htet phit thin dar ko oo sar pay ya mar ta bar wa par.
Post By : la yate pyar
"t kal naw" lol ask lite mal , t kal so dar nal .... he hee
Post By : sal kyaw tat min tar lay
so sarry everybody.
ုပညာရှင်တွေပဲ ဖြစ်နေပါစေ......... ကိုယ်ချစ်တဲ့ ထူး.....ကိုပဲ တမ်းတတယ်။ ထူး.....ကိုပဲ ချစ်တယ်။ ထူး.....ကိုပဲ ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးတယ်။ ထူး.....က တို့ရဲ့ ပထမအချစ်ဖြစ်သလို နောက်ဆုံးအချစ်လည်းဖြစ်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ ထူး.....က လွဲရင် ဘယ်သူကိုမှ မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။ တို့ဘ၀မှာ ထူး..... သာပထမ၊ ထူး..... သာဒုတိယ၊ ထူး..... သာတတိယ။
aung ye`lin so yin top he he ................... thu ka i ko chit tal loayin paw yin i ka paw like mal u ka i ko ku ma chit tar i ka u ko chit tar kyar p lo ku ma paw lo sat soe tal lo nawwwwwwwwwwwww
Post By : စုလေး
min yae kaw than lay ko amyal kyar chin nay mi tal myan myan pyan lar tot nor
Post By : kyalsinlay
moe moe so yin pyan chit like mar pop naw ...............
Post By : chomar2288@gmail.com
ဘယ်သူကလာပြောပမလဲ အဲဒါအိမ်မက်ဘဲ ဒါမှမဟုတ်ရင်း စိတ်ကူးရင်တာဘဲ သူ့ တို့ကအနုပညာသမားတွေဘဲ ပြီးတော့သူတို့ က..................??????????????????
Post By : အိမ်မက်
ကျွန်တော့်မှာ ချစ်ရမယ့်ကောင်မလေးရှိတယ် လို့ ပြောလိုက်မှာပေါ့ ....သူကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကို မှ လက်မထပ်ချင်တာပဲလေ..........
Post By : ကိုမျိုး (ကောင်လေး)
အဲလိုမျိူးတစ်ခါမှမတွေးထားဘူး အဲလိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး ...........
Post By : abc.myintmo@gmail.com
အင်း.... ကျန် တဲ့ လူ ဆို ရင် တော့ မ ပြော တတ် ဘူး ... ထယ် စောက် လေး ဆို ရင် တော့ အို ရ ချည် သေး ရဲ့ .... အ ဟီးးးး
Post By : တုံတုံ
လောကမှာ ချစ်သူက အကောင်းဆုံးပါ။ ချစ်သူသာ ပထမ၊ ချစ်သူသာ ဒုတိယ၊ ချစ်သူသာ တတိယ။ ချစ်သူကလွဲရင် အကုန်ရုပ်ဆိုးတယ်။ ရင်လည်းမခုန်
wellcome . very happy.
Post By : shin
Post By : ကဗျာကယာ
ကိုဖိုးချစ် ဆိုရင် စဉ်းစားမယ်.....ဟဲဟဲ
Post By : phochitak7@gmail.com
Post By : ကာရံချို
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်က ငြင်းမှာပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က သ၀န်တိုတက်တယ် ပြီးတော့ သူက ကိုယ့်အနားမှာ အချိန်ပြည့် ပြုစုပေးမှာ မဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့် ကျွန်တော်သာဆို ငြင်းပါ့မယ်
Post By : ချစ်မောင်
i always welcome aung ye lin
Post By : သဲသဲ
သူ့ကလွဲရင် အခြားတစ်ယောက်အတွက်နေရာမရှိပါဘူး လို့.....
Post By : မြတ်နိုးသူ
1 khar 1 khar lwan tal 1 khar 1 khar pyaw tal 1 khar 1khar.....................
Post By : yarmarphon89
် ၀န်ဘင်းဆိုရင်တော့ လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ပဲ
Post By :့ အသဲ
ဥပမာ........၀တ်မှုန်ေ၇ွှ၇ည်ကလက်ထပ်ခွင့်လာတောင်း၇င်..ငါအ၇င်ဆုံးပြောမယ့်.......စကားက စကားကဘာလဲဆိုတေ့ာ....ငါ၇ိုက်ကွင်းပေါ်ေ၇ာက်နေတာလား....ဒါမှမဟုတ်.. ငါအိပ်မက်မက်နေတာလားလု့်ိ
Post By : hellay
Post By : kyawzayarkunn
Post By : Phyu
sai sai soe yin no bal
Post By : ei monkyaw
ကျွန်တော်ကတော့ .. အဲဒီလိုကြေးသာဆိုရင် .. မျိုးမျိုးခိုင်ကိုပဲမျှော်နေတော့မယ် .. ဘာ လို့လဲသိလား .. ကျွန်တော်လည်းအတင်းတုတ်ရတာဝါသနာပါတယ်လေ ... အသွင်တူရင်အိမ်သူဖြစ်တယ်တဲ့ ..တစ်ကယ်သူကသာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းလို့ကတော့ ကျွန်တော်လည်း အလိုလိုနေရင်း .. ကိုကင်းကောင်တို့နဲ့ ရောပြီး ၀င်ရိုက်လို့ရပြီ။
Post By : မြန်မာမွန်စွယ်စုံ စစ်ရွှေလင်းပိုင်
bal lo hma ma load bu.
Post By : na
Post By : nadyhmue
အရမ်းရင်ခုန်နေတဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်.... အားနာစရာကြီးဆိုပြီး ငြင်းလိုက်ဘို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်......
Post By : ဒေးအယ်....
အုဝဲ ဆို ပြန်ချစ်မယ်
Post By : chitoomg08
First တခမ်းတနား ကျေးဇူးတင်မယ်. Second အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ဇာတ်ညွန်းတစ်ခုလို ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း တစ်ထိုင်တည်း အစအဆုံး ရေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း Any လောက် ရှင်းပြမယ်. လက်ထပ်တယ်ဆိုတာလည်း လက်နှစ်ခုထပ်ရုံနဲ့ မပြီးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း Any လောက် ရှင်းပြမယ် . နောက်ဆုံး Third ကတော့ ဘ၀ဆိုတာ လှေငယ်(1)စီး ပင်လယ်ထဲ မျောနေသလို ပါပဲ. လိုချင်တဲ့ကမ်းကို နံပါတ်ပြောပြီး ကပ်လို့မရဘူး....!
Post By : ၀င်ရိုးစွန်း
ဟာ................ ကောင်းတာပေါ့........ ဇိမ်ပဲ...ဇိမ်ပဲ............. ချစ်သူလဲရ၀မ်းလဲဝ.....
Post By : ice
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် ရင်ခုန်သံညှိကြည့်မယ်လေ... ရင်ခုန်သံနှေးနေရင် ဒါမှမဟုတ် မြန်လွန်းနေရင်လည်း မဖြစ်ဘူးလေ......... ဒါမှ......... :)
Post By : Ko Max
kyut lo ya hmar ma hout bu .apyaw bal ya mal
Post By : wyine
ma like bu. because, thu roh ka han saung tat tal nouh tha wan to hma pop nay toe la ,hein wai yan la, myint myat la. he he sa rs naw
Post By : ngun thin shwe(moon)
Post By : chee thout
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ကတော့ တစ်ယောက်မကဘူး။ အများကြီးလာလို့ရတယ်။ ဟီးဟီး။ တစ်ခုပဲ မင်းသားတွေကိုတော့ ကန်တော့ဆွမ်းပါနော်။
Post By : လူကျော်